154 Xildhibaan oo Xaflad Prof Xasan Sheekh Maxamuud ku weheliyey maanta Hotel Safaari iyo Saaxiibadii 2dii shariif oo ka baaqsadey kulankii Hotel Plaza City – idalenews.com
Xildhibaano kor u dhaafaayo 154 ayaa maanta waxay ku kulmeen xaflad qado sharaf ah oo ka dhacdey hotel Safaari oo ku yaala magaalada Muqdisho. Xafladaas oo ka qeyb aheyd olalaha musharaxa Madaxweynaha Soomaaliya Prof Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xubihii ka qeybgaley oo kor u dhaafaayey 154 xildhibaan waxaa ugu muhiimsanaa oo halkaasina ka hadley ka mid ahaa Cali Khaliif Galeyr, C/wali Ibrahim Muudeey oo horey u ahaa gudoomiye ku xigeenkii 1aad ee barlamaanka, Cismaan Cilmi Boqore, Prof Dalxa, Maxamed Rashiid Sheikh Daahir, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, iyo kuwa kale oo aan magacyadooda la soo koobi karin.
Ali Khaliif iyo Cabdiweli Muudeey oo khudbada isu dhow halkaa ka jeediyey ayaa sheegey in siyaasadu ay kala geyso saaxiibo isku dhow, taasna maanta aad ka arki kartaan kulamada hadda ka socda 2da hotel ee Safaari iyo Plaza City.
Gudoomiye Xigeenkii hore ee Baarlmaanka Cabdi Wali Ibraahim Muudeey isagoo hadlaayey ayaa sheegay in Baarlmaanka cusub uu doonayo Isbedel waxuuna ku baaqay in xildhibaanada codkooda siiyaan Prof Xasan Sheekh Maxamud oo ah muwaadin u qalma in la doorto.
“Maanta meesha aan taaganahay waa muhiim siyaasaduna waxa ay rabtaa isbedel waad ogtihiin in sxbkey Shariif Xasan labo xafladood kala joogno anigawaxaan aaminsanahay Xasan Sheekh in uu yahay ninkii dalkaan dhibka ka saarilahaa”ayuu yiri Xildhibaan Cabdi WaliMuudeey.
Xildhibaan Cusmaan Cilmi Boqore oo ka hadlay kulanka ayaa Xildhibaanada u sheegay in ay doortaan aqoon yahaykarti leh isagoona tusaale u soo qaatay Xasan Sheekh Maxamuud oo ah hogaamiya Isbadeldoon ah.
Ugu dambeeyntii Musharax XasanSheekh Maxamuud oo ka hadlay kulanka ayaa qudbad soo jiidatay Xildhibaanaddajeediyey, waxa uuna tilmaamay in uu biloowday isbadelka , waxa uuna dalbaday inisbadelka la sii dhiiro geliyo.
”Dowladnimadu waan wada leenahay anigana waxaan noqon doonaa kii fududeeynayay idinkanuna aad ka shaqeysaan, isbedelku waa biloowday aanu dhameystirno aniguna is bedel ayaan u tagaanahay” ayuu yiri Musharax Xildhibaan Xasan Sheekh.
Maalinta berri ayaa lagu wadaa inay dhacdo doorashada Madaxtinimada Soomaaliya, taasoo noqoneysa markii u horeysay muddo 42-sano oo lagu doorto Caasimada Soomaaliya Madaxweyne Soomaaliyed
Daawo Mid ka mida ah xaasaska Sheekh Shariif oo Sarajooga ka dhacdey xili uu ka qudbeynaayey Hotel Plaza City